MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ရှမ်း/မြောက် KIA, တပ်မဟာ (၄) ဒေသတွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်
ထို့ အပြင် (၄.၂.၂၀၁၄) ရက်နေ့ တွင် လည်း KIA, တပ်ရင်း (၃၄) ဒေသ၊ လွယ်ယ တွင် KIA, တပ်ရင်း (၃၄) တပ်ဖွဲ့ ၀င်များ နှင့် မြန်မာ အစိုးရစစ်တပ် တို့ ထပ်မံ ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားကြောင်း KIA, တပ်မဟာ (၄)အရာရှိများထံမှ သတင်းရရှိပါသည်။
Lahta Sam Mung KIA, Dap ba (4) Ginra Hta Gasat Poi Byin
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Hpyendap, lahta sam mung KIA,dap ba (4) n pu KIA, dap dung (34) gin ra hta (3.2.2014)ya shana de daw ( 5:00) pm daram hta Munglwi kaw KIA Dap dung (34)na KIA, Myutaw hpyen hpung ni hte Myen tai hpyen ni gasat poi byin ai lam na chye lu ai n dai kasat poi hta Myen tai hpyen maga de na marai (4) si hkrum ai lam na chye lu ai.
Matut nna (4.2.2014)ya shani hta mung KIA, Dap Dung (34) ginra, Loi Ya mare kaw gasat poi bai matut byin ai lam buga masha ni kawn chye lu ai.
at 2/05/2014 08:54:00 AM